Ibsa Ijjennoo Miseensota ABO Kutaa KeniyaaMagaalaa – Nairobi – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa Ijjennoo Miseensota ABO Kutaa KeniyaaMagaalaa – Nairobi
Ibsa Ijjennoo Miseensota ABO Kutaa Keniyaa
Magaalaa – Nairobi Kenya
Ebla 22, 2019
1. Labsiin hatattamaa/Komaand postiin seeraan ala uummata Oromoo irratti labsame hattattamaan akka ka’u ni gaafanna.
2. Badii maqaa komaandi postiin Raayyaa Ittisa mootummaa Itoophiyaan ummata Oromoo irratti raawwatame Itti gaafatamaan mootummaa Itiyoophiyaati. Kanaafuu Warreen gochaa kana raawwate seeratti akka dhihaatan ni gaafanna.
3. Sochii WBO hiikkachisuuf godhamaa jiru ni balaaleffanna.
4. Gochi sochii ABO ugguruu fi miseensota, akkasumas deggertoota ABO hidhuu hattamaan dhaabbatee, warreen hidhaa keessatti dararamaa jiran haal duree tokko malee akka hiikaman, akkasumas waajiraalee ABO cufaman hatattamaan akka banaman ni hubachiifna.
5. Yakki saboota adda addaa hidhachiisuudhaan Waraana daangaalee Oromiyaa kaabaa fi kibba, bahaa fi dhiha hunda irratti raawwataamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu, yakka dalagamaa jiru kanaaf mootummaan itoophiiyaa itti gaafatama akka fudhatu ni beeksifna.
6. Gochi WBO kabaja nagaayaatii fi uummata Oromoof jecha karaa nagaa qabsaa’uu filatee mooraa jiru summii nyaachisuun yakka. Gocha gara jabinaa kanaafis ittigaafatamaan mootummaa Itoophiyaa yoo ta’u, warreen gochaa suukanneessaa kana raawwattanis murtii seeraatti akka dhiyaatan ni gaafanna.
7. Finfinneen handhuuraa fi magaalaa guddittii Oromiyaati. Kanaafuu dhimmi magaalaa Finfinnee marii fi murtii uummata Oromoon alatti qaama kamiifuu akka dhihaatu hin hayyamnu.
8. Gochaaan Buulchiinsa OPDO/ODP umurii bittaa isaa dheereffachuuf hawaasa Oromoo gandaa fi amantiin adda qooduu hatattamaan akka dhaabu ni gaafanna.